EMMA STONE HEIGHT, WEIGHT, AGE, AFFAIRS, ခင်ပွန်းသည်၊ - ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး
Emma Stone Height, Weight, Age, Affairs, ခင်ပွန်းသည်၊
အမည်ပြောင် မင်းသမီး Emma
အလုပ်အကိုင် မင်းသမီး, အဆိုတော်
အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် 53 ကီလိုဂရမ်
မွေးနေ့ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၈
အသက် (၂၀၁၆ တွင်ကဲ့သို့) ၂၈ နှစ်
မွေးရပ်မြေ Scottsdale, အရီဇိုးနား, U.S.A.
ဇာတိမြို့ Scottsdale, အရီဇိုးနား, U.S.A.
ကျောင်း Sequoya မူလတန်းကျောင်း, Scottsdale, Arizona
Scottsdale, Arizona, ကျောင်းစုစည်းကျောင်းခရိုင်
ကောလိပ် Xavier ကောလိပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု, Phoenix မြို့, အရီဇိုးနား
အချစ် ရုပ်ရှင်။ စူပါဘား (၂၀၀၇)
တီဗီ The Partridge Family (၂၀၀၄)
မိသားစု ဖခင် - ဂျက်ဖရီချားလ်စ်ကျောက်ခေတ် (စီးပွားရေးသမား)
အမေ - Krista Jean Stone (အိမ်ဆောက်လုပ်သူ)
အစ်ကို - Spencer ကျောက်ခေတ်
ဘာသာတရား လူသာရင် (ပရိုတက်စတင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဌာနခွဲ)
လူမျိုးစု ဆွီဒင်၊ ဂျာမန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ စကော့၊
လိပ်စာ (Fan Mail) 3532 Hayden ရိပ်သာလမ်း Culver စီးတီး, CA 90232 U.S.A.
ဝါသနာ စာဖတ်ခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ဖုတ်ခြင်း
အငြင်းပွားစရာ သူမ၏ရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိပြီးနောက် ချစ်သူ (၂၀၁၅) မင်းသမီး Emma သည်တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဝက်ဖခင်နှင့်အတူဟာဝိုင်ယီအမျိုးသမီးလေးပုံတစ်ပုံ၏အခန်းကဏ္takingကိုယူခြင်းကြောင့်အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကြည့်ရှုသူများအကြားမကျေမနပ်ဖြစ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူသည် Emma ကိုခုခံကာကွယ်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက်တောင်းပန်ရန်အွန်လိုင်းစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ mayonnaise နှင့်အတူ Beets နှင့်ဘာမှမ, fries, ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်, ဆူရှီ
အကြိုက်ဆုံးအဖျော်ယမကာများ Cappuccino ဘီယာ
အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေ Tom Hanks, Jesse Eisenberg
အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီး Diane keaton
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင် ဟောလိဝုဒ် အဆိုပါလူရှုပ်, Annie ခန်းမ, Hocus Pocus, Beetlejuice
အကြိုက်ဆုံးဂီတသမား အဆိုပါ Beatles, Spice မိန်းကလေးများ
အကြိုက်ဆုံးသီချင်း The Beatles မှ Blackbird, Suzanne Vega မှ Tom's Diner စားသောက်ဆိုင်
အကြိုက်ဆုံးတီဗီရှိုး အမေရိကန် Huff, ကိတ်မုန့် Ace, iCarly
အကြိုက်ဆုံးစာအုပ် J.D. Salinger မှ Franny နှင့် Zooey၊ မြင့်မားသောခေါင်မိုးထုပ်၊ လက်သမားနှင့် Seymour ကိုမြှင့်ပါ - J. D. Salinger ၏နိဒါန်း
အကြိုက်ဆုံး Gadget ကို နားကြပ်
အကြိုက်ဆုံးရေမွှေး Serge Lutens မှ La Nuit, Chane မှ Gardenia
အကြိုက်ဆုံးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ မာရိကိတ်, အက်ရှလေအိုလန်
အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင် Los Angeles ရှိ Sunset Boulevard ရှိဆူရှီပန်းခြံ
အကြိုက်ဆုံးကံကြမ္မာ Los Angeles မြို့, ကော့စတာရီ
ရေးရာ / ရည်းစား Teddy Geiger (အဆိုတော်၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၉)
Kieran Culkin (မင်းသား၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁)
Andrew Garfield (မင်းသား၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၅)
စေ့စပ်ထားသူ Andrew Garfield (မင်းသား၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅)
ကားစုဆောင်းခြင်း Audi S6၊ Mini Cooper
Net Worth ဒေါ်လာ ၉ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
စင်တီမီတာအတွက် kajal agarwal အမြင့်
Emma Stone ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား
မင်းသမီး Emma Stone အရက်သောက်ပါသလား?
မင်းသမီး Emma ဟာ sketch ဟာသအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပေမယ့်သူမအသက် ၄ နှစ်အရွယ်မှာသရုပ်ဆောင်ဖို့စိတ်ပြင်းပြခဲ့တယ်။
သူမသည်သတ္တုပတ်ပတ်လည်7နှစ်များအတွက်သတ္တုတွင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုတွေခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါစိုးရိမ်တာထက်ကြီးတာ ။ '
သူမသည် ၂၀၀၅ တီဗီရှိုးတွင်လော်ရီပါပိုဂျင်ကဲ့သို့သောသူမ၏ပထမဆုံးအခန်းကဏ္getကိုရရှိရန် ၈ လခန့်အချိန်ယူခဲ့ရသည် The New Partridge မိသားစု။
သရုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ HTML နှင့် web design ကိုလေ့လာခဲ့သည်။
သူမ၏စာရိုက်နှုန်းမှာ ၁၀၀ စကားလုံးတစ်မိနစ်ဖြစ်သည်။
သူသည်အစပိုင်းတွင်“ Riley Stone” ကိုသူမ၏ဇာတ်စင်အမည်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အလယ်အလတ်ရှိ Malcolm တွင် guest ည့်သရုပ်ဆောင်ပြီးနောက်သူမအမေပေးသောအမည်ဝှက် Emma ဟူသောအမည်ကိုရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့နာမည် -Norman ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏လက်ရှိခွေး“ Ren” သည်ရွှေပြန်လည်ရရှိသည်။
သူမသည်သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည် တေလာဆွစ် , ဂျနီဖာလောရင့် , မာသ MacIsaac နှင့်သကြားလင်းမုတ်ဆိတ်။
သူမ၏စိတ်ကူးသည်ရုပ်ရှင်၌သင်္ဘောတည်ဆောက်သူသောမတ်စ်အင်ဒရူး၏အခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သောကနေဒါနိုင်ငံမှဗစ်တာဂါဘာနှင့်အတူသောက်ရန်ဖြစ်သည် တိုက်တန်းနစ် (1997) ။
သူမမှာဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Judd Apatow (Producer) ကသူ့ရုပ်ရှင်အတွက်အနီရောင်သွားဖို့အကြံပြုပြီးတဲ့အခါသူမအနီရောင်ကိုစပြီးစတင်သုတ်သင်လိုက်တယ်။ မင်္ဂလာပါ (2007), သူမအရမ်းကြိုက်တယ်ကြောင့်သူမအနီရောင်အရောင်နှင့်အတူဆက်လက်။
သူမသည်ပထမ ဦး ဆုံး“ ငါယောက်ျားလေးများကြိုက်သည့်အရာကိုငါသိ၏” သီချင်းကိုသီဆိုခဲ့သည် အဆိုပါအိမ် Bunny (2008) ။
သူမစွဲစွဲလမ်းနေစဉ်မှာသူမရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဖျက်လိုက်သည် FarmVille ဂိမ်း။
သူမနှင့်သူမအမေသည်သူတို့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းဖြစ်သော“ ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုငှက်၏ခြေထောက်ပေါ်၌တက်တူးထိုးထားသည်။ Blackbird အားဖြင့် ဘီတဲလ်စ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုအတွက်အကယ်ဒမီဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည် La La Land (2016) ။
မင်းသား swvyy ဖခင်အမည် arvind
ခြေမ Ellen ဖြစ်သည်ဟုသမ္မတကတော်အမြင့်
မွေးဖွား၏ haji mastan ရက်
အဆိုပါ Kapil Sharma ပြပွဲမင်းသမီး
bhabi ji ghar par hain အစစ်အမှန်အမည်များကိုသွန်း